Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Malta » Misokatra ho an'ny Amerikanina vita vaksiny i Malta
Vaovao Mafana • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao lafo vidy • Vaovao Mafana Malta • Vaovao • fanorenana • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao isan-karazany
Fijerena an'habakabaka amin'ireo Tanàna Telo, Vittoriosa, Senglea ary Cospicua
I Michelle Buttigieg, solontena amerikana avaratra ho an'ny fahefan'ny fizahan-tany any Malta, nanatrika manokana ny herinandro fitsangatsanganana Virtuoso dia nitondra vaovao tsara ho an'ireo mpanolotsaina momba ny dia lavitra nifanena taminy. Malta, nosy iray any Mediterane, dia nanambara vao haingana fa misokatra amin'ireo Amerikanina vita vaksiny izay afaka manamarina ny mombamomba ny fahasalamany amin'ny alàlan'ny fampiharana nomerika antsoina hoe Verifly. Ramatoa Buttigieg dia nanamarika fa "Malta, izao, manana bebe kokoa aza hanolorana ilay mpandehandeha manankarena manana trano fandraisam-bahiny vaovao misy kintana dimy, trano fisakafoanana / spa vaovao, trano fisakafoanana Michelin Star ary traikefa voatahiry."
Malta dia nanolotra ny fomba fahandro farany ho an'ny rendrarendra, ahitana karazana trano lafo vidy manomboka amin'ny fananana kintana dimy, trano fandraisam-bahiny mihaja, hatramin'ny palazzos manan-tantara sy trano fiompiana.
Ny mpitsidika koa dia afaka mankafy traikefa voatahiry avy amin'ny fitsangatsanganana an-tsokosoko an'ireo toerana manan-tantara ka hatrany amin'ny fividianana lakana.
Mora azo idirana i Malta amin'ny alàlan'ny Gateways eropeana lehibe.
Nanamarika ihany koa i Michelle Buttigieg fa misy fahalianana sy fientanam-po be eo amin'ny Virtuoso Advisors hahafahany manolotra traikefa lafo vidy amin'ny mpanjifa any amin'ny toerana miteny anglisy, tsy dia be olona noho ireo manintona manan-tantara eoropeanina malaza, ary miaraka amin'ny fahasamihafana maro karazana ka misy zavatra ilaina daholo. "Malta dia manome ny fomba fahandro farany ho an'ny rendrarendra, ahitana karazana trano lafo vidy manomboka amin'ny fananana kintana dimy, trano fandraisam-bahiny mihaja, hatramin'ny palazzos manan-tantara sy trano fiompiana," hoy Ramatoa Buttigieg. “Ny mpitsidika dia afaka mankafy traikefa voatahiry ihany koa manomboka amin'ny fitsangatsanganana an-tsokosoko an'ireo toerana manan-tantara ka hatrany amin'ny fividianana lakana. Ireo traikefa lafo vidy rehetra ireo dia hita bebe kokoa any Malta raha oharina amin'ny vidin'ny trano itoerana sy fitsidihana manokana any amin'ny tanibe Eropa. ” Mora azo idirana i Malta amin'ny alàlan'ny Gateways eropeana lehibe.
Herinandro fitsangatsanganana Virtuoso any Las Vegas no hetsika fiaraha-monina lehibe indrindra eran-tany ho an'ny mpikambana Virtuoso, Mpanolotsaina ary ireo mpiara-miombon'antoka Preferred. Manokana ny tambajotra Virtuoso, misy ny fanendrena tambajotran-tena manokana, fotoana fivelarana matihanina misimisy, Community Globetrotting, ary fankalazana an'i Virtuoso, tambajotram-pitaterana lafo vidy indrindra eto an-tany.
The nosy masinin'i Malta, eo afovoan'ny ranomasina mediteraneanina, dia misy fonenana miavaka indrindra amin'ny lova voaorina tsy miova, ao anatin'izany ny hakitroky avo indrindra amin'ny UNESCO World Heritage Site amin'ny firenena firenena na aiza na aiza. Valletta, natsangan'ny Knights of St. John izay reharehany, dia iray amin'ireo fahitana ao amin'ny UNESCO sy ny renivohitry ny kolontsaina eropeana ho an'ny taona 2018. Ny fiarovana an'i Malta amin'ny vato dia miainga avy amin'ny maritrano vato tranainy indrindra eran'izao tontolo izao, ka hatrany amin'ny iray amin'ireo Empira anglisy rafitra fiarovan-tena mahatahotra indrindra, ary ahitàna fangaro marobe amin'ny maritrano anatiny, ara-pivavahana sy ara-tafika hatramin'ny vanim-potoana taloha, medieval ary am-piandohana. Miaraka amin'ny toetrandro mamirapiratra izaitsizy, morontsiraka manintona, fiainana andalam-piainana miroborobo ary tantara 7,000 taona manitikitika, dia misy zavatra maro azo jerena sy atao. www.visitmalta.com